MacBook Air တဖန်ပြန်လည်အောင်မြင်ဖို့ Apple ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
10 Sep 2018 . 4:04 PM
Apple ရဲ့ MacBook Air ဟာ ယခုလက်ရှိ ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးက ထုတ်လုပ်နေတဲ့ Ultrabook ဈေးကွက်ကို စတင်ခဲ့တယ်လို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ MacBook တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ Apple က New MacBook 12″ ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် Apple MacBook Air ဟာ ဘယ်သူမှတောင် ဝယ်ယူချင်စိတ်မရှိတဲ့ MacBook တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
လက်ရှီ သိရတဲ့သတင်းတွေအရတော့ Apple ဟာ MacBook Air ကို ပြန်လည် အသစ်တဖန်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက်တန် MacBook အသစ်တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာတင် အဆိုပါ MacBook အသစ်ကို မြင်လာရဖွယ်ရှိနေပြီးတော့ Apple အနေနဲ့ MacBook Air ကို ပြန်ပြီး အောင်မြင်စေဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Apple ဟာ New MacBook မှာ Butterfly Mechanism Keyboard အသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ အခုလက်ရှိ MacBook Pro တွေမှာပါ အဆိုပါ Keyboard ကို အသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Key Travel နည်းပါးတဲ့ Keyboard တွေဟာ စာရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ အဆင်ပြေပေမယ့် ဖုန်တွေဝင်ရောက်တတ်တဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ရခက်ခဲပြီး Error ဖြစ်တာတွေကို ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Apple ဟာ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ MacBook Pro 2018 မှာတော့ အဆိုပါ Keyboard Error ကို Membrane Layer တစ်ခုထည့်သွင်းထားပြီး ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အတွက် အခုထွက်လာမယ့် MacBook Air အသစ်မှာလည်း အဆိုပါ Keyboard အသစ်ကို ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
New MacBook ထက် Port တွေပိုမို ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ခြင်း
Apple ရဲ့ New MacBook ကို အသုံးပြုဖူးတယ်ဆိုရင် အဆိုပါါ MacBook မှာ ပြဿနာဆိုလို့ တစ်ခုပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Port အနေနဲ့ USB-C Port တစ်ခုထဲပါဝင်ပြီးတော့ Charging ကိုပါ အဆိုပါ Port ကပဲဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် Data Transfer လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ အဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု Apple ကနေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Apple MacBook Air မှာ ပါးလွှာပေမယ့် အနည်းဆုံး USB-C Port ၂ ခုလောက်ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
High-Res Resolution Bezel-less Display
Apple MacBook Air ရဲ့ လက်ရှိ အားနည်းချက်ကတော့ လောလောဆယ်မှာ ဈေးနှုန်းတူ Ultrabook တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘေးဘောင်တွေက အလွန်ကြီးမားနေပြီးတော့ Resolution အရလည်း နိမ့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Apple အနေနဲ့ လက်ရှိ Ultrabook တွေရဲ့ Standard တစ်ခုတောင်ဖြစ်လာတဲ့ ဘေးဘောင်တွေသေးငယ်တဲ့ Display ဒီဇိုင်းအသစ်ကို MacBook Air နဲ့အတူ မိတ်ဆက်လာသင့်ပါပြီ။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Display Resolution ဟာလည်း Retina အဆင့်ကို မြှင့်တင်ပြီး MacBook Pro တွေလိုမျိုး TrueTone Display ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဈေးကို $999 ဝန်းကျင်မှာပဲ ရောင်းချဖို့ လိုအပ်ခြင်း
Apple ရဲ့ အနိမ့်ဆုံးသော MacBook Pro ဒါမှမဟုတ် New MacBook ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံး $1299 ကနေ စတင်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် Apple MacBook Air အနေနဲ့ ဈေးကို $999 ဝန်းကျင်မှာပဲစတင်သင့်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အခုဈေးဟာ Apple ကို ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်သလိုပဲ တခြားသော Ultrabook တွေနဲ့လည်းပိုပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာပါ။
ဒါကတော့ ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် Apple ရဲ့ MacBook Air အသစ် ဒါမှမဟုတ် Budget MacBook အသစ်မှာ ပါဝင်လာဖို့ မျှော်လင့်မိတဲ့အချက်တွေပါ။ အခုပြောသွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကို Apple က ဆောင်ရွက်မလားဆိုတာကတော့ မသိရသေးပေမယ့်သေချာတာကတော့ Apple ရဲ့ MacBook အသစ်ဟာ ယခင်က ထွက်ထားတဲ့ MacBook တွေထက် ဈေးသက်သာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ MacBook Air ဟာ ယခုလကျရှိ ကှနျပြူတာကုမ်ပဏီတှအေကုနျလုံးက ထုတျလုပျနတေဲ့ Ultrabook စြေးကှကျကို စတငျခဲ့တယျလို့တောငျ ပွောလို့ရတဲ့အထိ အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့တဲ့ MacBook တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာတော့ Apple က New MacBook 12″ ကို ထုတျလုပျခဲ့တဲ့အတှကျ Apple MacBook Air ဟာ ဘယျသူမှတောငျ ဝယျယူခငျြစိတျမရှိတဲ့ MacBook တဈခုဖွဈနပေါပွီ။
လကျရှီ သိရတဲ့သတငျးတှအေရတော့ Apple ဟာ MacBook Air ကို ပွနျလညျ အသဈတဖနျဆောငျရှကျနပွေီးတော့ ဒျေါလာ ၁၀၀၀ အောကျတနျ MacBook အသဈတဈခုကို ဆောငျရှကျနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဖွဈနိုငျတာကတော့ ဒီနှဈမကုနျခငျမှာတငျ အဆိုပါ MacBook အသဈကို မွငျလာရဖှယျရှိနပွေီးတော့ Apple အနနေဲ့ MacBook Air ကို ပွနျပွီး အောငျမွငျစဖေို့ လိုအပျနတေဲ့ အခကျြတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Apple ဟာ New MacBook မှာ Butterfly Mechanism Keyboard အသဈကို မိတျဆကျခဲ့ပွီးတော့ အခုလကျရှိ MacBook Pro တှမှောပါ အဆိုပါ Keyboard ကို အသုံးပွုနတောဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ Key Travel နညျးပါးတဲ့ Keyboard တှဟော စာရိုကျတဲ့နရောမှာတော့ အဆငျပွပေမေယျ့ ဖုနျတှဝေငျရောကျတတျတဲ့အတှကျ ပွငျဆငျရခကျခဲပွီး Error ဖွဈတာတှကေို ကွုံတှနေ့ရေတာဖွဈပါတယျ။ Apple ဟာ နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ MacBook Pro 2018 မှာတော့ အဆိုပါ Keyboard Error ကို Membrane Layer တဈခုထညျ့သှငျးထားပွီး ဖွရှေငျးခဲ့တဲ့အတှကျ အခုထှကျလာမယျ့ MacBook Air အသဈမှာလညျး အဆိုပါ Keyboard အသဈကို ထညျ့သှငျးဖို့ လိုအပျနတောဖွဈပါတယျ။
New MacBook ထကျ Port တှပေိုမို ပါဝငျဖို့ လိုအပျခွငျး
Apple ရဲ့ New MacBook ကို အသုံးပွုဖူးတယျဆိုရငျ အဆိုပါါ MacBook မှာ ပွဿနာဆိုလို့ တဈခုပဲရှိနတောဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ Port အနနေဲ့ USB-C Port တဈခုထဲပါဝငျပွီးတော့ Charging ကိုပါ အဆိုပါ Port ကပဲဆောငျရှကျတဲ့အတှကျ Data Transfer လုပျခငျြတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ အဆငျမပွတောပဲဖွဈပါတယျ။ အခု Apple ကနေ ဆောငျရှကျနတေဲ့ Apple MacBook Air မှာ ပါးလှာပမေယျ့ အနညျးဆုံး USB-C Port ၂ ခုလောကျပါဝငျဖို့ လိုအပျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
Apple MacBook Air ရဲ့ လကျရှိ အားနညျးခကျြကတော့ လောလောဆယျမှာ စြေးနှုနျးတူ Ultrabook တှနေဲ့ ယှဉျရငျ ဘေးဘောငျတှကေ အလှနျကွီးမားနပွေီးတော့ Resolution အရလညျး နိမျ့နတောပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Apple အနနေဲ့ လကျရှိ Ultrabook တှရေဲ့ Standard တဈခုတောငျဖွဈလာတဲ့ ဘေးဘောငျတှသေေးငယျတဲ့ Display ဒီဇိုငျးအသဈကို MacBook Air နဲ့အတူ မိတျဆကျလာသငျ့ပါပွီ။ နောကျတဈခကျြကတော့ Display Resolution ဟာလညျး Retina အဆငျ့ကို မွှငျ့တငျပွီး MacBook Pro တှလေိုမြိုး TrueTone Display ဖွဈလာဖို့ လိုအပျနပေါတယျ။
စြေးကို $999 ဝနျးကငျြမှာပဲ ရောငျးခဖြို့ လိုအပျခွငျး
Apple ရဲ့ အနိမျ့ဆုံးသော MacBook Pro ဒါမှမဟုတျ New MacBook ကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ အနိမျ့ဆုံး $1299 ကနေ စတငျတာကို တှရေ့မှာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ Apple MacBook Air အနနေဲ့ စြေးကို $999 ဝနျးကငျြမှာပဲစတငျသငျ့တယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ အခုစြေးဟာ Apple ကို စြေးနှုနျးအသငျ့အတငျ့နဲ့ သုံးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ သတငျးကောငျးဖွဈလာမှာဖွဈသလိုပဲ တခွားသော Ultrabook တှနေဲ့လညျးပိုပွီး ယှဉျပွိုငျနိုငျမှာပါ။
ဒါကတော့ ဒီနှဈမကုနျခငျမှာ ထှကျရှိလာမယျ့ Apple ရဲ့ MacBook Air အသဈ ဒါမှမဟုတျ Budget MacBook အသဈမှာ ပါဝငျလာဖို့ မြှျောလငျ့မိတဲ့အခကျြတှပေါ။ အခုပွောသှားတဲ့အခကျြတှအေကုနျလုံးကို Apple က ဆောငျရှကျမလားဆိုတာကတော့ မသိရသေးပမေယျ့သခြောတာကတော့ Apple ရဲ့ MacBook အသဈဟာ ယခငျက ထှကျထားတဲ့ MacBook တှထေကျ စြေးသကျသာလာမှာဖွဈပါတယျ။